musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sri Lanka Kuputsa Nhau » Sri Lanka inoenderera mberi nekukiya kutsva sekufa kweCOVID kuwedzera
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Sri Lanka Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nyika dzezvitsuwa dzaifanirwa kutora matanho akasimba mukuedza kudzora kupararira kwecoronavirus, sezvo hutachiona nekufa kuri kuwanda muzvipatara zveSri Lanka, mochari nenzvimbo dzinopisirwa zvitunha.
Sri Lanka inosheedzera kukiya-kwemazuva gumi.
Sri Lanka itsva COVID-19 kesi uye kufa kuri kuwedzera.
Kupararira kwechirwere kunodzvinyirira zvipatara zveSri Lanka nemochari.
Sri Lanka yakamanikidzwa kukotamira kumanikidziro kubva kuna nyanzvi dzezvekurapa mushure mekunge yanyora huwandu hwayo hwepamusoro-soro hwezuva rimwe chete hweVANHU-19 vakafa muna 187 ne3,793 nyaya nyowani neChitatu uye vazivisa kukiyiwa kwemazuva gumi anotanga nhasi manheru.
Sri Lanka yakashuma hutachiona hunokwana mazana matatu nemakumi matatu nemakumi manomwe nepfumbamwe kubva kutanga kwechirwere gore rapfuura, paine vanhu 372,079 6,604 vakafa. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti mutero chaiwo waipetwa kanokwana kaviri.
“Kukiyiwa kwenyika yose kuri kutanga kubva na10pm nhasi (Nyamavhuvhu 20) kusvika Muvhuro (Nyamavhuvhu 30). Mabasa ese akakosha achashanda senguva dzose, ” Gurukota rehutano Keheliya Rambukwella akadaro pa Twitter.
Gurukota junior rehutano, Channa Jayasumana, anga adaidza iyo Delta musiyano wehutachiona "bhomba rine simba rakaputika muColombo uye riri kupararira kumwe kunhu".
Nyanzvi dzezvokurapa, vatungamiriri vezvitendero, vezvematongerwo enyika uye vezvemabhizimusi vakadaidzira kuti nyika yose ikurumidze kudzivirira kupararira kwezvirwere.
Vachiyambira kuti zvipatara nemamochari zvainge zvave kusvika pamwero wazvo wakanyanya, vanachiremba nemasangano evashandi vakaramba vachikurudzira hurumende kuti itore mutemo.
Hurumende yeSri Lankan yanga ichinonoka kuita izvi, ichitaura nezvehupfumi hwanga husiri kumira.
Zvirwere zvezuva nezuva zveSri Lanka zvakapfuura nekaviri mumwedzi kusvika paavhareji ye3,897 XNUMX.
Zvipatara zviri munyika yemamiriyoni makumi maviri nerimwe zvevanhu zviri kufashukira nevarwere veCOVID-21 sevanyanyisa kutapurirana Delta kuburikidza nevanhu.
Mitemo mizhinji yatovepo, nezvikoro, nzvimbo dzekurovedza muviri uye dzimba dzekushambira dzakavharwa uye michato nemitambo yemimhanzi yakarambidzwa. Zviremera zvakatemawo nguva yekurara husiku kubva Muvhuro, ichitadzisa kufamba kubva 10pm kusvika 4am zuva rega rega.
Simba rechitatu reSri Lanka rehutachiona rakapihwa mhosva pamhemberero dzechinyakare dzeSinhala neTamil Nyowani pakati paApril.
Kutevera a Kukiya kwemwedzi-kureba, hurumende yakavhurazve nyika muna Chikumi ichivimba nechisimba chekudzivirira hutachiona senzira yayo huru yekutarisana nekupararira.
Inenge chikamu chimwe muzvina chevagari veSri Lanka vakabaiwa zvakakwana, vazhinji vacho vaine mushonga weChina weSinopharm.
Sri Lanka yakabvumidzawo Pfizer, Moderna, AstraZeneca neRussia Sputnik V kupfura.
Kunyangwe paanopfuura mamirioni mashanu emamiriyoni evagari makumi maviri nemasere vakagamuchira mishonga miviri yekudzivirira, hutachiona hwakatapurira vanhu vazhinji kupfuura zviyero zvehurumende nezvipatara zvakazvimirira.